Maxkamadda oo dhageysan doonto dacwad la xariirta shaqa joojinta macalimiinta – The Voice of Northeastern Kenya
Maxkamadda oo dhageysan doonto dacwad la xariirta shaqa joojinta macalimiinta
Star FM January 2, 2019
Iyadoo berri dib loo furayo dugsiyada dalka ayaa lagu wadaa inay maanta maxkamadda shaqaalaha dhageysato dacwad uu u gudbiyay guddiga adeegga macalimiinta ee TSC.
Guddigan ayaa doonaya in barayaasha dalka laga hor istaago inay ka dhabeyaan shaqa joojin qaran oo ay horay ugu hanjabeen.
Hasa ahaate maxkamadda ayaa maalmo ka hor soo saartay amar ku meel gaar ah halka maanta ay dhageysan doonto labada dhinac.
Xoghayaha guud ee ururka qaran ee macalimiinta dalka ee KNUT ahna xildhibaan baarlamaanka si magacaabid ah ku galay Mr. Wilson Sossion ayaa shalay sheegay inay maanta maxkamadda iska xaadirinayaan.
Waxaa uu carrabka ku dhuftay inay soo bandhigi doonaan arrimaha ay tabanayaan oo ay ka mid tahay inaan lagu sii tallaaba qaadin qorshahha TSC ay in ka badan 3000 oo maamulayaal ah uga wareejinayso dugsiyadii ay ka howlgalayeen.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay inay ka go’antahay in isbedel ballaaran lagu sameeyo waxbarashada dalka balse guddiga TSC ay ku eedeynayaan inuunan daacad ka ahayn wax ka qabashada arrimaha ay macalimiinta dalbanayaan oo ay ugu horeyaan inaan lagu sii tallaaba qaadin wareejinta sido kalena barayaasha la dallacsiiyo.
Mr. Sossion ayaa macalimiinta lagu amray inay iska xaadiriyaan xarumo kale oo la geeyay ku booriyay inay amarkaasi iska dhaga tiraan maadaama sida uu hadalka u dhigay uu ilaalinayo amarka maxkamadeed ee soo baxay.
Xoghayaha ayaa intaasi ku daray inay akhriyeen qoraalka maxkamadda oo uu muujinayo in mudnaanta koowaad la siiyo wada hadalka iyo heshiiska.
Wasiirka wasaaradda shaqaalaha ee dalka Mr. Ukur Yattani ayaa shaqa joojinta ay macalimiinta ku hanjabeen ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Mr. Sossion ayaa dhankiisa sheegaya inay tallaabada u qorsheysan sharci tahay isagoo guddiga TSC ku eedeyay inuu caqabad ku noqday xal u helidda arrimaha la kala tabanayo.
Kenyaanka ayuu u sheegay inay ururada macalimiinta u taaganyihiin sidii lagu heli lahaa waxbarasho taya leh.
← Ciidanka xoogga Dalka Soomalaiya oo howlgalo ka wada gobolka shabeelada Hoose.
Koox hubeysan oo wadanka Mali ku dishay 33 qof →